कुल वस्तु निर्यात १०९ प्रतिशतले वृद्धि: ४ खर्ब ७८ अर्ब बढीको आयात, कुन नाकाबाट कति ? - Arthatantra.com
कुल वस्तु निर्यात १०९ प्रतिशतले वृद्धि: ४ खर्ब ७८ अर्ब बढीको आयात, कुन नाकाबाट कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तीन महिनाको अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १०९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ६५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको तीन महिनको देशको वर्तामान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः १४७.१ प्रतिशत, १९.४ प्रतिशत र २७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वस्तुगत आधारमा सोयाविन तेल, पाम तेल, पिना, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), जुटका सामान लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने चिया, अलैंची, जस्तापाता, तार, आयुर्वेदिक औषधी लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
आव २०७८/७९ को तीन महिनामा कुल वस्तु आयात ६३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ ।
निर्याततर्फ कन्चनपुर, कृष्णनगर, मेची र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाहेकका नाकाबाट गरिएको निर्यात वृद्धि भएको छ । आयातततर्फ कैलाली भन्सार कार्यालयबाहेकका नाकाबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ ।
आव २०७८/७९ को तीन महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ५८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब १३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १५.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा भारतबाट अमेरिकी डलर भुक्तानी गरी ५४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो ।
वि.सं.२०७८ कात्तिक ३० मंगलवार १७:०४ मा प्रकाशित
अघिल्लाे बाइडेनले एक ट्रिलियन अमेरिकी डलरको विकास निर्माण कानुनमा हस्ताक्षर गरे
पछिल्लाे १५१ अर्ब ७० करोड घाटामा चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति पनि ७६ अर्ब १४ करोड घाटामा